အလွှာသုံးလွှာပါသောအထုပ်အပိုးပါသောကွန်တိန်နာ Hotel-Prefab house-NANTONG GAOYA သံမဏိကိုယ်ထည် CO ။, , LTD.
သားညှပ်ပေါင်မု Panel နှင့်သံမဏိစာရွက်
အပိုင်းသံမဏိ （H, ငါ）
NANTONG GAOYA သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ CO ။, , LTD.
NANTONG GAOYA အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေး CO.LTD. ဒီဇိုင်းအတွက်အထူးပြု,အဆောက်အဦးအမျိုးအစားကိုထုတ်လုပ်လုပ်ပြီး install,နှင့်အခြားစီးရီး.
အလွှာသုံးလွှာပါသော Pack Pack ကွန်တိန်နာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်စုရုံးပါ
ဟိုတယ်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် Flat Pack container ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များကားအဘယ်နည်း
ကုန်သေတ္တာများကိုကမ္ဘာတဝှမ်းကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုဘေးကင်းစွာသယ်ယူရန်အသုံးပြုသည်. ၎င်းသည်အလွန်ခိုင်ခံ့ပြီးအကြမ်းခံသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာနေရာဖြစ်သည်. ပြားချပ်ချပ်ကွန်တိန်နာ ရေကြောင်းကွန်တိန်နာကနေပြောင်းလဲနေသည်.
Flat pack container ၏ cuboid ဖွဲ့စည်းပုံကဒီဇိုင်နာအားအာကာသဒီဇိုင်းတွင်ရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးပေးသည်, နှင့်မြောက်မြားစွာပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်. ထိုကွောငျ့, ၎င်း၏ပုံပန်းသဏ္alwaysာန်သည်ဗိသုကာများစွာကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဆန်းသစ်သောဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်များကိုအဆက်မပြတ်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်. Flat pack container သည်သယ်ယူရန်လွယ်ကူပြီးမည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မဆိုအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်. ၎င်းကိုနေရာအမျိုးမျိုးသို့အောင်မြင်စွာပေါင်းစည်းနိုင်သည်, ထိုကဲ့သို့သောဟိုတယ်များအဖြစ်, ဟိုတယ်များ, တည်းခိုခန်း, စသည်တို့ကို.
ပြားချပ်ချပ်ထုပ်ကွန်တိန်နာဟိုတယ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုများစွာအထောက်အကူပြုကြောင်းလူသိများသည်. ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အသစ်အဆန်းများထပ်ထည့်ထားသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်. Flat pack ကွန်တိန်နာဟိုတယ်သည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်ချောချောမွေ့မွေ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးလူအများနှစ်သက်ကြသည်. ယခုအခါများစွာသောဟိုတယ်များသည်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသည့်ပြားချပ်ချပ်ထုပ်ပိုးကွန်တိန်နာဟိုတယ်ကိုဖန်တီးမည်. ဒီတော့ဒီလိုမျိုးပြားချပ်ချပ်ထုပ်ကွန်တိန်နာဟိုတယ်မျိုးသည်လူတို့လိုက်စားရန်အဘယ်အကျိုးရှိသနည်း?
ဟိုတယ်မှအသုံးပြုသောပြားချပ်ချပ်အထုပ်ကိုသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်, အရာအချို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုပိုမိုအားကောင်းခုခံနှင့်ပုံပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. ဒီဇိုင်းဆွဲသူသည်သူ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်များနှင့်အညီထူးခြားသောအိမ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်, အရာ၌နထေိုငျဖို့ခရီးသွား attract ည့်ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်.
ရှည်လျားသောအသုံးပြုမှုပြီးနောက်အစဉ်အလာအဆောက်အအုံသည်ယိုယွင်းနေသောဖြစ်ရပ်ပေါ်လာနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ပြားချပ်ချပ် pack ကိုကွန်တိန်နာ၏အိမ်သူအိမ်သားတင်းကျပ်စွာထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာရှိပါတယ်, ဤရွေ့ကားရွှေ့ပြောင်းအိမ်၏ဤကြင်နာပိုကောင်းတံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်လာစေလိမ့်မည်, မိုးရာသီတွင်ရေယိုစိမ့်မှုမရှိတော့ပါ.
Flat pack ကွန်တိန်နာဟိုတယ်သည်ကိုယ်ထည်အဖြစ်သံမဏိကိုအသုံးပြုသည်, ထို့နောက်ဟိုတယ်တစ်ခုစီ၏ဒီဇိုင်းအယူအဆအရနေရာပေါင်းများစွာပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်, မည်သည့်အရွယ်အစားကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်, အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်, နှင့်အထွေထွေပြားချပ်ချပ် pack ကိုကွန်တိန်နာဟိုတယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖန်တီးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသက်တမ်းကြာရှည်စေလိမ့်မည်.
အရည်အသွေးမြင့်မားသော Flat Pack ကွန်တိန်နာများအသုံးပြုခြင်းသည်ဆောက်လုပ်ရေးကာလတစ်ခုလုံးကိုတိုစေရုံသာမကကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုသက်သာစေသည်. နောက်ဆုံး, သင်ကမသုံးပါလျှင်, သငျသညျကိုလည်း disassemble နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်, ငါတို့ရှာသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်ပိုမိုအရေးပါသည်.
Gaoya တွင်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့ရှိသည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကအားဖြင့်သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး အသစ်များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများအသစ်များတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အသုံးချခြင်းတို့အတွက်အဓိကကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်. ကုမ္ပဏီအဖွဲ့သည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပဆောက်လုပ်ရေးသဘောတရားများကိုလက်ခံပါသည်, အမျိုးသားသံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဖောက်သည်များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးအိမ်များကိုဖန်တီးရန်နံရံသစ်ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည်, နှင့်အပြည့်စုံဆုံးနည်းပညာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဖြေရှင်းချက်ပေး; committed to China's green environmental protection Housing construction, နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အဆင်ပြေဆုံးစွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအိမ်ရာကိုဖန်တီးရန်.
Prepainted သွပ်ရည်စိမ်ကွိုင် (PPGI)
Nantong Gaoya သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ CO ။ , Ltd မှ. လှပတဲ့မှာတည်ရှိပါတယ်, 1996 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်,ငွေရတတ်သောသူနှင့်အသက်ရှည်မြို့,Nantong,ရှန်ဟိုင်းမြို့အနီးအရာဖြစ်ပါသည်.
Rugao Baipu စက်မှုပန်းခြံ, Jiangsu ပြည်နယ် (200 အနောက်ဘက် Baipu မီးရထားဘူတာ၏မီတာ)
မူပိုင်ခွင့်© NANTONG GAOYA သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ CO ။, , LTD ။. Meeall မှပံ့ပိုးမှု